Camaloow Online - News: Ciidamada jabuuti ee qaybta ka ahciidamada amisoom oo magalada baledweeyn fariisin cusub ka sameeystay dhinaca galbeed .
19 June 2013 23:29:50 Random Media
MUXAADARO TARBIYADA SAXDA AH
Sheeko gaaban oo qosol leh 2
· Guests Online: 559
DHACDO LAYAAB LEH EE NIN NAAG JINI AH GUURSADAY
Ciidamada jabuuti ee qaybta ka ahciidamada amisoom oo magalada baledweeyn fariisin cusub ka sameeystay dhinaca galbeed .
Ciidamada AMISOM ee ku sugan Magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan ayaa saldhig cusub waxa ay ka sameyteen Magaaladaasi baladweyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Saldhigaan ayaa Ciidamada Jabuuti ee qaybta ka ah Howlgalka AMISOM waxa ay ka sameysteen Galbeedka Magaaladaasi Baladweyne halkaasi oo maalmihii dambe ay ka taagneed dhibaatooyin ammaanka caqabad ku ah.
Ciidamada Jabuutiyaankaa ee la geeyay Galbeedka Magaalada Baladweyne ayaa waxa ay sugi doonaan ammaanka dhinaca Galbeed iyagoo sidoo kale ka hortag unoqon doona abaabulo la sheegay in Al Shabaab ka sameeyaan Halkaasi.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca ammaanka Maamulka Gobolka Hiiraan Axmed Cabdalla Inji ayaa waxa uu sheegay in Ciidamadaasi ay kaalin fiican ka qaadan doonaan amamanka Magaaladaasi balad Weyne ee xarunta Gobolka Hiiraan.
Maalmihii dambe ayaa waxaa Magaaladaasi Balad Weyne ka socday Howl gallo Xoogan oo lagu sugayo ammaanka Maagalada islamarkaana looga hortagayo weeraro Ururka Al Shabaab ay ka geestaan .
· baarlin xaji on 03/01/2013 ·
0 Comments · 26816 Reads
DAAWO CIYAARTA WALASAQADA EE HIIRAAN...
WARARKA MAANTA 10-06-20111
10,941,653 unique visits